३६ देखि ६२ करोडसम्मका आईपीओ आउँदै, बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रीन भेन्चर्सको तयारी कस्तो छ ? | Artha News Nepal
Home	आईपीओ	३६ देखि ६२ करोडसम्मका आईपीओ आउँदै, बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रीन भेन्चर्सको तयारी कस्तो छ ?
३६ देखि ६२ करोडसम्मका आईपीओ आउँदै, बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रीन भेन्चर्सको तयारी कस्तो छ ?
बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड र ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बलेफी हाइड्रोपावरले फागुन २५ गते र ग्रीन भेन्चर्सले फागुन २८ गते बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
दुवै कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानिय र आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् । बलेफी हाइड्रोपवारले स्थानिय र सर्वसाधारणका लागि रू. ३६ करोड ५५ लाख ९४ हजार बराबरको ३६ लाख ५५ हजार ९४० कित्ता र ग्रीन भेन्चर्सले रू. ६२ करोड ५० लाख बराबरको ६२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ विक्री गर्न लागेका हुन् ।
आईपीओ विक्रीका लागि दुवै कम्पनीहरुले विक्री प्रबन्धक समेत नियुक्त गरिसकेका छन् । बलेफी हाइड्रोपावरको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको विक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
balefi hydro powerrgreen ventures ltdipo of balefi hydroipo of green venturesnepseshare market nepal